Vaovao - fahalalana fanasokajiana mpahandro induction
Ao an-dakozia, ny induction cooker dia iray amin'ireo fitaovana ao an-dakozia izay fahita matetika. Saingy amin'ny fanasokajiana ny lozisialy fampidirana dia mazava tsara ianao tsirairay avy? Inona avy ireo fahandro fampidirantsika mahazatra? Ny lahatsoratra manaraka dia manazava ny fanasokajiana ny lozisialy fampidirana an-tsipiriany, jereo tsara!
Araka ny herin'ny vatan-tsakafo fampidirana dia azo zaraina ho mpahandro ao an-tokantrano sy mpahandro fampidiran-draharaha ara-barotra. Araka ny fanasokajiana ny lohan'ny lafaoro, ny vata fandrindrana ao an-trano dia azo zaraina ho mpahandro tokana, mpahandro indroa, fahandro marobe ary lasantsy iray.
Araka ny herin'ny induction cooker dia azo zaraina ho mpahandro ao an-trano sy mpahandro fampidirana varotra.
Ny tanjaky ny mpahandro tokana dia 120V-280V, ary ny tena fahita indrindra dia ny 1900W-2200W, izay be mpampiasa amin'ny fandrahoana sakafo ho an'ny fianakaviana. Nivoatra aloha io ary be mpampiasa eto amin'ny firenentsika.
Avo roa heny mpahandro
Ny herinaratra miasa ao amin'ny lafaoro misy lohan-doha dia 120V-280V ihany koa. Amin'izao fotoana izao dia misy fisaka iray sy iray concave ary roa fisaka ao amin'ny tsena anatiny. Ny herin'ny fahandro tokana ankapobeny dia 2100W, ary ny fandrahoan-tsakafo roa heny amin'ny fotoana iray dia tsy mihoatra ny 3500W.
Multi fandrahoan-tsakafo, mazàna ho an'ny fandrahoana induction roa miampy vata fandrahoana infrared. Fotoana azo ampiharina: toerana rehetra ampiasana fatana nentim-paharazana, toy ny hopitaly, ozinina sy toeram-pitrandrahana, hotely, trano fisakafoanana, oniversite ary oniversite, andrim-panjakana sns. Mety indrindra amin'ny fotoana tsy misy famatsian-tsolika na fampiasana solika voafetra, toy ny lakaly, lalamby, fiara, sambo, fiaramanidina ary ny fampandrosoana an'i Shina hafa, indrindra ny fampandrosoana haingana ny herinaratra elektrika, ity mpanao fahandro miditra indostrialy mahery vaika ity dia ho be mpampiasa.
Iray iray lasantsy
Ny entona iray herinaratra iray dia fampifangaroana ny vata fandrahoan-tsakafo sy ny fatana fatana, ny lohan'ny lafaoro dia afaka mampiasa gazy nentim-paharazana, ny lozon'ny lafaoro iray hafa dia mampiasa fahandro fampidirana, herinaratra ankapobeny 2100W, dia vokatra roa taona.